Wararka Maanta: Arbaco, Oct 17, 2012-Xildhibaannada Baarlamaanka Somalia oo Maanta codka Kalsoonida u qaadaya Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya
Mudane Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah xoghayeyaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in kulanka maanta uu shir-guddoomin doono Prof. Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka codka loogu qaadi doono ra'iisul wasaaraha.
"Haddii ay noqonto in codka kalsoonida loo qaado ra'iisul wasaaraha keligiis waa loo qaadayaa, sidoo kale haddii uu wato liiska golihiisa wasiirrada iyadana codka waa loo qaadayaa," ayuu yiri xildhibaan Maxamed Cumar oo sheegay in qorshuhu yahay in ra'iisul wasaaraha fursad loo siiyo howshiis haddii lagu qanco warbixintiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Saacid lixdii bishan Oktoobar, isagoo kala soo dhex-baxay in ka badan laabtan xubnood oo isku soo taagay inay jagadan qabtaan, wuxuuna madaxweynuhu sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay inuu wax ka qaban karo xaaladda uu dalku ku sugan yahay.
Inkastoo aan la ogeyn go'aanka uu baarlamaanku qaadan doono, haddana waxaa jira warar hoose oo sheegay inay u badan tahay in xildhibaannadu ay kalsoonidooda siiyaan ra'iisul wasaaraha, iyadoo haddii kalsoonida uu helo isla maanta la dhaarin doono.
Soomaaliya ayaa waxay ka baxday bishii Ogoosto ee sannadkan xilligii KMG ahaa oo dowladihii hore ay kusoo shaqeynayeen muddo 12-sano ah, iyadoo mas'uuliyinta dowladdan ay dhammaantood yihiin xubno ku cusub siyaasadda dalka, rajo weynna laga qabo inay wax ka bedeli karaan xaaladda uu dalku ku sugan yahay.